Antony 5 iainanay alaim-panahy | TOKO VAVAKA
Home Fiainana araka an'Andriamanitra Antony 5 iainantsika fakampanahy
Androany isika dia hampianatra amin'ny antony 5 iharan'ny fitsapana. Iray amin'ireo fanontaniana mampiady hevitra henoko amin'ny maha mpiandry ondry ahy ny antony tokony hiatrehan'ny mpino Fakam-panahy? Hanontany ny olona sasany, tompoko, raha manompo an'Andriamanitra amin'ny fahazotoana rehetra aho, tsy tokony ho tsara sy ho afaka amin'ny fitsapana ve ny fiainako? Ny fanompoana ataontsika amin'Andriamanitra na ny toerantsika ao amin'Andriamanitra dia tsy misy ifandraisany amin'ny fakam-panahy na fitsapana.
Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra, rehefa avy nifady hanina sy nivavaka nandritra ny efapolo andro sy alina dia nalain'ny devoly fanahy avy hatrany izy nivoaka avy tany an'efitra. Matio 4: 1-11 Ary Jesosy dia nentin'ny Fanahy nankany an-efitra, mba halain'ny devoly fanahy. Ary rehefa nifady hanina efa-polo andro sy efa-polo alina Izy dia noana. Nanatona azy ilay mpaka fanahy ka nanao hoe: Raha Zanak'Andriamanitra ianao, teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Jesosy namaly hoe: Voasoratra hoe: Tsy ny mofo ihany no hiveloman'ny olona, ​​fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra. »Ary nentin'ny devoly nankany amin'ny tanàna masina izy ka nampiorina azy eo amin'ny tampon'ny tempoly. "Raha Zanak'Andriamanitra ianao," hoy izy, "mianjerà any ambany. Fa voasoratra hoe: 'Izy handidy ny anjeliny ny aminao, ary izy ireo hanandratra anao ho eny an-tànany, fandrao ho tafintohina amin'ny vato ny tongotrao (Sal. XNUMX. XNUMX). Jesosy namaly azy hoe: Voasoratra hoe koa: Aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitrao. Ary nitondra azy tany an-tendrombohitra avo dia avo ny devoly ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao sy ny voninahiny. "Izany rehetra izany dia homeko anao," hoy izy, "raha hiankohoka eo anatrehako ianao." Ary hoy Jesosy taminy: Mihataha amiko, ry Satana; Fa voasoratra hoe: Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao (Deo. XNUMX. Jesosy dia heniky ny herin'ny Fanahy Masina, voarakitra ao amin'ny Baiboly fa lehilahy tsy nisy kilema izy, kanefa naka fanahy azy ny devoly.
Io dia mametraka fotsiny ny zava-misy fa afaka miatrika fakam-panahy isika na manao ahoana na manakaiky an'iza Andriamanitra. Tena nalaim-panahy i Abrahama na dia nantsoina hoe sakaizan'Andriamanitra aza. Nandalo fotoam-pitsapana niaraka tamin'i Sarah vadiny i Abrahama. Nanome toky hatrany Andriamanitra fa hanao an'i Abrahama ho rain'ny firenena nefa, tsy nanan-janaka i Abrahama na dia fito-polo taona aza. Joba, na dia lehilahy mahitsy teo imason'Andriamanitra aza izy, dia voarakitra ao amin'ny Baiboly fa mbola navelan'Andriamanitra halaim-panahy izy. Hoesorina ny fahalianantsika liana raha toa ka fantatsika ny antony mahatonga antsika hosedraina.
Ny zavatra iray tokony ho fantatsika dia hoe, isaky ny fakam-panahy, dia nanome lalana hivoahana Andriamanitra raha izany no izy. Ny bokin'ny Tsy misy fakam-panahy dia nahatratra anao afa-tsy izay mahazatra ny olombelona; Fa mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anao halaim-panahy mihoatra noho izay zakanao Izy, fa amin'ny fakam-panahy dia hamboarina koa ny làlana hahafahanareo mba hahazakanareo izany 1 Korintiana 10: 13 Tsy nisy fakam-panahy nahatratra anao afa-tsy izay fahita amin'ny olombelona; fa Andriamanitra is mahatoky, izay tsy hamela anao halaim-panahy mihoatra noho izay zakanao, fa amin'ny fakam-panahy dia hamboarina koa ny lalan'ny fandosirana, mba hahazoanao mahazaka izany.
Fa maninona Andriamanitra no mamela ny zanany halaim-panahy?
Ny fakam-panahy dia ampahan'ny asan'Andriamanitra hamolavola antsika
Tsy mahatakatra ny finoana velively isika raha tsy mahita azy io mamaky afo ary mbola mivoaka mamirapiratra toy ny masoandro. Ny ankafizin'ny Kristiana ankehitriny dia ny fahasoavana. Mora kokoa ho an'ny Apôstôly Peter ny nanala baraka an'i Jodasy Iskariota taorian'ny namadihany an'i Kristy. Na izany aza, rehefa tonga ny fotoana hihazonan'i Peter ny finoana dia tsy nahomby koa izy.
Indraindray Andriamanitra dia mamela ny fakam-panahy hamolavola ny finoantsika azy. Indraindray Andriamanitra dia manala ilay fefy afo, manala ny fahasoavana ary mamela antsika hiasa tsy mitafy tongotra amin'ny tsilo amin'ny fiainana. Tsy natao hanisy ratsy antsika izany, fa mba hampitaovana antsika amin'ny lahasa lehibe kokoa. Ny momba indrindra dia ny momba. Nasain'Andriamanitra niandry ela be izy mba hahalalany ny karazan'olombelona. Ny finoan'i Abrahama dia nahatonga azy ho naman'Andriamanitra.
Ny fakana fanahy dia mametraka an 'Andriamanitra amin'ny seho
Ny fisedrana sy ny fakampanahy dia manambara ny maha-Andriamanitra sy ny maha-izy ny heriny. Rehefa ao anaty tafio-drivotra isika dia miady mafy. Indraindray, dia toa miady irery isika satria nohajambain'ny tafio-drivotra ary tsy afaka nahita an'Andriamanitra tao anaty tadio intsony izahay.
Nasehon'Andriamanitra ny heriny tamin'ny fiainan'i Abrahama taorian'ny nahaterahan'i Saraha vadiny tamin'ny faha-90 taonany. Ny fakam-panahy dia manambara ny herin'ny herin'Andriamanitra Tsitoha.
Mampiverina antsika amin'Andriamanitra io
Indraindray Andriamanitra dia mamela ny fakam-panahy sy ny fitsapana eo amin'ny fiainan'ny mpino mba hahafahany mahita ny lalana hiverina any amin'Andriamanitra. Rehefa natory tao anaty sambo i Kristy dia nanomboka ny tafio-drivotra ary saiky nivadika ilay sambo.
Ireo apostoly dia nanadino tamin'izay fotoana izay fa i Kristy aza niaraka tamin'izy ireo tao anaty sambo noho ny tahotra. Niezaka mafy araka izay azony natao izy ireo mba hamahana ilay toe-javatra saingy toa tsy ampy ny tsara indrindra vitany. Amin'izao fotoana izao dia efa ho faty izy ireo dia niverina ny sainy ary tsaroany fa tao an-tsambokely niaraka tamin'izy ireo i Kristy. Niantso vonjy tamin'i Kristy izy ireo ary nilamina ny tafio-drivotra.
Ny fitsapana ny fiainana indraindray dia alefa hanampy antsika hahita ny lalan hiverina any amin'Andriamanitra.
Toriteny ho an'ny olon-kafa ny fakam-panahy
Ny fiainana asa dia ohatra azo ampiharina. Rehefa avy niatrika ny fahoriana nitarika ny fahafatesan'ny zanany sy ny fahaverezan'ny hareny izy. Raha ny tena izy dia tsy nanana na inona na inona i Joba. Tsy nisy antony tokony hahavelomany ny aretina satria efa simba avokoa ny asany rehetra.
Namonjy azy anefa Andriamanitra ary nitahy azy tsy nisy fetra. Nanankarena sy nanankarena kokoa noho ny taloha izy. Ny fiainan'i Joba dia toriteny ho an'ny hafa indrindra fa ny tsy mpino fa Andriamanitra irery ihany no Tsitoha.
Mba hampianarana antsika faharetana
Ny fampanantenan'Andriamanitra dia fahafoizan-tena. Na dia mandalo aza ny lanitra sy ny tany, nefa tsy misy tsy tanteraka ny teniny. Na izany aza, ny fakam-panahy mahazo antsika dia mety hampihemotra ny fampanantenan'Andriamanitra amintsika.
Nampanantenain'Andriamanitra i Abrahama fa hataony rain'ny firenena maro ary 90 taona mbola tsy manan-janaka i Abrahama. Nampianatra an'i Abrahama ara-bakiteny ny fomba hihazonana fihetsika tsara Andriamanitra rehefa miandry ny fahatanterahan'ny fampanantenan'Andriamanitra. Indraindray, ny fitsapana sy ny fakam-panahy dia mampianatra antsika hanam-paharetana ary avelao Andriamanitra hitarika.
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny fanahin'ny ranomasina
Next lahatsoratraSalamo 100 Ny dikan'ny hoe Andininy
Fomba 5 hiomanana amin'ny fiavian'i Jesosy
Teboka vavaka hanoherana ny famoretana